साधारण प्राकृतिक पुरानो पीडा उपचार - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट जेनिस | अप्रिल 23, 2018 | आहार र पोषण, स्वास्थ्य र कल्याण, औषधी भांग |0|
1 कुनै गोली बिना पीडा बाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ
2 सही खाना खाने एक प्राकृतिक पुरानो पीडा उपचार हो
2.1 तपाईको खानामा चिनी काट्नुहोस्
यदि तपाइँ पुरानो दुखाइबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ सम्भवतः केहि पनि छैन जुन तपाइँले यसलाई निको पार्नुहुन्न। धेरै व्यक्ति निर्धारित औषधिहरुमा फर्कन्छन्। जब त्यसले काम गर्न सक्दछ, यसले निर्भरतामा जान सक्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि प्राकृतिक क्रोनिक दर्द उपचारहरू छन् जुन परिक्षण र परीक्षण गरीएको छ।
जेनिस अलेक्ज्याण्डर प्राकृतिक उपचारमा उदार विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। उनको लेखमा साधारण पुरानो पीडा उपचार, उनी प्राकृतिक सल्लाह दिन्छन् कसरी तपाईं प्राकृतिक रूपमा लामो समयसम्म पीडा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीलाई थाहा छ, बहुसंख्यक व्यक्तिहरू दुखाइ कम गर्न निर्धारित औषधिहरूमा भर पर्दछन्। तर तपाई पिलहरू बिना दु: खबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए यदि तपाइँ रसायन प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाइँले के गर्नुपर्छ? खानाको साथ सुरु गरौं। हामीले के खायौं त्यसले दुखाइ कम गर्नमा ठूलो असर पार्न सक्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि स्वस्थ आहार महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले हाम्रो शरीरमा राख्ने कुराको ख्याल राख्छौं भने हामी अस्वस्थ हुने सम्भावना कम हुन्छ।
उनको लेखमा 'चिनी लालसालाई कसरी रोक्ने', जेनिसले एस्पार्टम, कृत्रिम चिनी र क्यान्डिडाको प्रभाव वर्णन गर्दछ।
धेरै व्यक्तिहरूले कड लिभरको तेल, फलाम वा जिंक जस्ता पूरकहरू लिन्छन्। जसै हामी यसका स्वास्थ्य लाभहरूको बारेमा अधिक सिक्छौं, मोरिंगालाई पूरकको रूपमा प्रयोग गर्दा लोकप्रियता बढेको छ। त्यसोभए दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्न कुन पूरक आहार प्रयोग गर्नुपर्दछ? जेनिस व्याख्या गर्नेछ।
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ कि गठियाजस्ता धेरै पीडादायी अवस्थाहरू एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी खाना खाएर राहत पाउन सकिन्छ? यो सत्य हो। कसरी भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
यहाँ जेनिसको लेखबाट केहि अर्कहरू छन् जसले वर्णन गर्दछ कि कसरी अधिक पीडामुक्त जीवन जिउन राम्रो छनौट गर्न सकिन्छ।
साधारण पुरानो पीडा उपचार
कुनै गोली बिना पीडा बाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ
दुखाइबाट छुटकारा पाउन रसायनहरूको प्रयोगले यसको हानिकारक, विनाशकारी पक्ष प्रभावहरू पुर्‍याउँछ। गैर-स्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) को सबै खतरनाक साइड इफेक्ट हुन्छ, एस्पिरिन समेत, जसले हरेक वर्ष हजारौं मानिसलाई मारेको छ। NSAID हरू तपाईको मुटु को लागी खराब हो। "
सही खाना खाने एक प्राकृतिक पुरानो पीडा उपचार हो
औषधीको रूपमा खाना प्रयोग गरेर पीडा कम गर्ने एक तरिका छ, जुन खाना भनेको हो। खाना खाने समस्या भनेको अधिकांश मानिसहरू जो खाइरहेका छन्, यो लाग्छ कि यो खानायोग्य र स्वादिलो ​​छ र हामी यसलाई खाएपछि तुरुन्तै मृत ड्रप गर्दैनौं, यो हाम्रोलागि ठीक छ र तिनीहरूले यसलाई खाना भन्छन्।
प्रशोधित खाना कहिलेकाँही हामीले खान्ने औषधीहरू भन्दा रसायनिक अधिक हुन्छ। अधिकांश "खाना" जुन हामी आज खान्छौं, म "नौं-फूड फूड" भन्छु यसको अर्थ यो खाना जस्तै देखिन्छ, खानाको स्वाद जस्तो छ तर यसले हाम्रो शरीरको लागि कुनै फाइदा गर्दैन र यसले हाम्रो कोषहरूलाई फुलाउँदछ र दुखाउँछ।
तपाइँको प्रशोधित खाना, अन्न, चिनी र पशु उत्पादनहरूको सेवन घटाउनुहोस् किनभने पशु उत्पादनहरू फस्फोरसमा अधिक हुन्छन् जुन शरीरलाई धेरै अम्लीय हुन्छ।
तपाईको खानामा चिनी काट्नुहोस्
फलमा चिनी न्यूनतम राख्नुपर्दछ किनभने फलमा फ्रुक्टोज कलेजोको लागि कम्ती छ र शरीरमा मदिरा जस्ता उत्तेजित गर्दछ।
केरा, आम, सुक्खा फल र पीच जस्ता मीठो फलहरू बेरी, अpe्गुर फल, नींबू र चूना जस्तो कम फ्रुक्टोज फलको साथ उत्तम प्रतिस्थापन गरिन्छ।
विरोधी भड़काउने खाद्य पदार्थहरूको उपभोग गर्दै
तपाईले भोकबाट जोगिने रासायनिक पदार्थ खान सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा विरोधी भडकाउने खानाहरू अदुवा र हल्दी हो। लसुन पनि उत्कृष्ट छ।
अत्यावश्यक ओमेगा3फ्याट्टी एसिडहरू पनि कम हुन्छ दाद कम गर्न। ओमेगा3फ्याटको उत्तम स्रोतहरू बिरूवाहरू हुन् जो चिया बीज, हेम्प बीज, अलसी / फ्याक्ससेड्सबाट आधारित हुन्। अखरोटसँग 3% ओमेगा3छ र प्लान्टमा आधारित ओमेगा3फूडहरू EPA र DHA मा रूपान्तरण गर्न जुन हामीलाई चाहिन्छ, अझ बढी दक्षतासाथ, तिनीहरूलाई जैविक हल्दीको साथ खान्दछ।
यदि तपाईं सुपरमार्केटमा शेल्फमा हल्दी किन्दै हुनुहुन्छ भने यो इरेडिएट हुनेछ जसले यसको गुणहरू गुमाउनेछ, त्यसैले यो जैविक हल्दी हुनु पर्छ।
कुन पूरकले पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ?
पूरकहरू लिँदा यो सधैं बिरूवामा आधारित सम्पूर्ण खाना प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। हल्दी बोटमा आधारित सम्पूर्ण खाना हुनेछ जस्तो कर्क्यूमिन विपरीत हो, जुन बोटको व्युत्पन्न हो।
सम्भव भएसम्म कुनै पनि पूरक वा खाना प्रकृतिको नजिक खाना सधैं तपाईंलाई तपाईंको बक्सको लागि अधिक धमाका दिन गइरहेको छ। भिटामिन डी को इष्टतम स्तर तपाईंको पहिलो प्राथमिकता हो। भिटामिन डी (हर्मोन डी) को पर्याप्त मात्रा बिना शरीरमा केहि पनि राम्रोसँग काम गर्दैन। यो प्रत्येक मेटाबोलिक प्रक्रियामा सामेल हुन्छ। यदि तपाईं यस्तो वातावरणमा बस्नुहुन्छ जहाँ अत्यधिक सूर्य छैन भने, हर्मोन डीको साथ पूरक आवश्यक छ वा तपाईं सुरक्षित टेनिंग बेड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
दुखाइ राहतको लागि लिन सबैभन्दा प्रभावकारी पदार्थ हो कैनबिस तेल.
पूरा लेख पढ्नुहोस् अधिक गहन जानकारी र साधारण पीडा उपचार को लागी सल्लाह को लागी।
पछिल्लोमहत्वपूर्ण काम साक्षात्कार तयारी सुझावहरू
अर्कोभावनात्मक निर्भरता हटाउन एनएलपी टेकनीक